Filatsahan-kofidina: Rroa ireo kandidà nanatitra antontan-taratasy teny amin’ny HCC | NewsMada
Filatsahan-kofidina: Rroa ireo kandidà nanatitra antontan-taratasy teny amin’ny HCC
Somary malaindaina sy mihisatra na efa hiditra amin’ny andro fahefatra aza. Niampy iray indray, taorian’ny kandidàn’ny TGV, Rajoelina ny nanatitra ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina ho filoham-pirenena.
Nahavita ny azy ary efa nametraka izany, teny amin’ny HCC koa, omaly, ny avy amin’ny Antokom-bahoaka (Aba), manolotra ny Praiminisitra teo aloha, Ravelonarivo Jean ho kandidà amin’ny fifidianana filoham-pirenena. “Miantso ny mpifidy izahay mba hijery sy hanamarina ny lisi-pifidianana dieny izao… Aoka isika ho mailo mandrakariva. Natolotry ny Aba ny Jly Ravelonarivo Jean, amin’izao fifidianana izao”, hoy ny iraka nametraka izany, Tata Ambroise teny Ambohidahy. Talen’ny fampieleza-kevitra kosa, Ramandimbiarison Zazah.
Tombanana fa mety hiandry fotoana farany tahaka ny mahazatra indray vao hirodorodo hiaraka amin’ny mpomba sy mpanohana azy, ireo kandidà, hametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiny. Efa fanao sy fahita ary fombantsika hatrany ny tahaka izany. Na izany aza, mety ho antony mampihisatra izany fanaterana antontan-taratasy izany koa ny fepetra napetraky ny HCC fa tsy azo raisina ary ho voailika ireo kandidà tsy manana antoko politika ara-dalàna.
Voailika sahady ny Hafari
Anisan’izany ary tsy afaka mifaninana sahady, Rafanomezantsoa Jean Nirina avy amin’ny Hafari satria tsy nahafeno izany mason-tsivana izany. Tara ny fijoroan’ny antokony na ny fikambanany ho ara-dalàna nefa koa tsy mahita olom-boafidy anjatony hanasonia ny haha kandidà azy koa ny tenany.
Tsiahivina fa hifarana ny 21 aogositra izao ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina eny amin’ny HCC.